ရွှေချည်ထိုးသက်တံ – Pann Satt Lann Books
Pann Satt Lann Books
အသစ်ထွက်နှင့် ကြိုတင်မှာယူနိုင်သည့် စာအုပ်များ
၂၀၂၁ တစ်နှစ်တာအရောင်းရဆုံး စာအုပ်(၃၀)
၂၀၂၀ တစ်နှစ်တာအရောင်းရဆုံး စာအုပ်(၃၀)
၂၀၁၉ တစ်နှစ်တာအရောင်းရဆုံး စာအုပ်(၃၀)
ကိုဗစ်-19 နှင့်ပတ်သက်သည့် စာအုပ်များ
ပန်းချီ ဂီတအနုပညာ စာအုပ်များ
အတ္ထုပ္ပတ္တိ မှတ်တမ်းနှင့် ခရီးသွား
အတွေးအမြင်၊ လူမှုဒဿန၊ သိပ္ပံ
ဗေဒင်၊ လက္ခဏာ၊ မျက်လှည့်
English Version Books
Children & Kid Books
စံပယ်ဖြူနု, မင်းဝေဟင်, မိုးကျော်ဇင်, မြစ်ကျိုးအင်း, လူခါး, ဝေ(စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်), သတိုး
(2မှတ်ချက်)
‘ရွှေချည်ထိုးသက်တံ’ မှာ..တစ်ယောက်နှစ်ပုဒ်နှုန်းဖြင့် ၀တ္ထုတို (၁၄) ပုဒ် ပါဝင်ရာ ခံစားမှုရသ စုံလင်လှ၏။ ၀တ်ထုတိုဆိုတာ ဒါပါပဲဟု လေ့လာစူးစမ်းချင်သူတွေကို လက်ယက်ခေါ်နေသော ၀တ္ထုများပါဝင်သည်…..
ဆရာမ မိချမ်းဝေ အမှာစာကောက်နှုတ်ချက် ဖြစ်ပြီး စာအုပ်လေးကို ဗချီလင်း၀ဏ္ဏ၏ အတွင်းသရုပ်ဖော်ပန်းချီပုံများဖြင့် ဝေဝေဆာဆာ ထုတ်ဝေထားပါတယ်…
5.5 × 0.5 × 8.2 inches
ပန်းဆက်လမ်းစာပေ၊ 2022 ဇန်နဝါရီလ၊ (ပ-ကြိမ်)
ရွှေချည်ထိုးသက်တံ အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု2ရှိပါသည်။
Rated 0.1 out of 5
Chris Mg (verified owner) – June 17, 2022
ဓါး(၇)လက် ကြယ်( ၇)စင်း မီးစက်(၇)ပွင့်
အမျိုးသား စာပေဆုရ ဆရာ၊ ဆရာမ (၇)ဦး ရဲ့ လက်ရာကောင်းတွေကို တစုတစည်းထဲ ဖတ်ရှုခွငိ့ရခဲ့တဲ့စာအုပ်လေးရဲ့အမည်က “ရွှေချည်ထိုး သက်တံ” ပါတဲ့။ အရင်တချိန်က ဆရာ ဆရာမတွေ တစုတစည်းထဲ ပါဝင်တဲ့စာအုပ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာ ထွက်ပေါ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ရှားပါးသွားတဲ့ သည်ဘက် ခေတ်မှာတော့ ပန်းဆက်လမ်းရဲ့ အားထုတ်မှုနဲ့ ပြန်လည် မြည်းစမ်းဖတ်ရှုခွင့် ရခဲ့ပါပြီ။ ကလောင်ထက်တဲ့ စာရေးသူတွေချည်း တစုတဝေးတည်း တွေ့လိုက်ရတဲ့ အတွက် နှစ်ထောင်းအားရ ဖြစ်မိပါရဲ့။
တစ်ဦးလျှင် (၂) ပုဒ်နှုန်းနဲ့ ဝတ္ထုတိုပေါင်း (၁၄) ပုဒ်ပါဝင်ပါတယ်။ အားရှိစရာ အရေအတွက်ပါ။ တခုပဲပြောစရာရှိတာက စာရေးသူတွေကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ တစိုက်မတ်မတ် အားပေးဖတ်ရှုတတ်မဲ့ စာဖတ်သူ တချို့အတွက် အချို့သော ဝတ္ထုတိုလေးတွေက ပုဒ်ထပ် ဖြစ်နေနိုင်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်တာလေးပါပဲ။ ကိုယ်ကတော့ ဆရာမိုးကျော်ဇင် နဲ့ ဆရာမြစ်ကျိုးအင်းကလွဲလို့ ကျန် ဆရာ၊ ဆရာများရဲ့ လက်ရာက မဖတ်ဖူးသေးတာမို့ လတ်ဆတ်စွာ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ စိတ်အာရုံကို ဖမ်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အတိုစု တချို့ကို ချပြချင်မိပါရဲ့။
ဆရာမ ဝေ(စီးပွားရေး)ရဲ့ #နှလုံးသားပေါ်သွေးတဲ့ဓါး ကတော့ ဖတ်စမှာတင် အာရုံတစ်ခုလုံးကို သိမ်းကြုံး ပိုက်ထွေးနိုင် တယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ အိမ်ထောင်တခုမှာ ဦးဆောင်ကွပ်ကဲမှုကို လုပ်ဆောင်ရတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ စွမ်းရည်က အင်မတန်မှ တာဝန်ကြီးပါတယ်။ လင်ရော မယားပါ ဟန်ချက်ညီညီ လှုပ်ရှားနိုင်ပါမှ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ ပါးစပ်အစေ့ လှုပ်ရှားနိုင်မဲ့ သည်ဘက်ခေတ်မှာ လင်မယားတွေအကြားက နားလည်မှုနဲ့ တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦးတန်ဖိုးထားမှုက သိပ် အရေးကြီးပါတယ်။ အရမ်းလည်း ထိရှလွယ်တာရယ်။ ဖခင်တစ်ဦးရဲ့ ညံ့ဖျင်းလှတဲ့ကွပ်ကဲမှု နဲ့ ခင်ပွန်းသည် တစ်ဦးရဲ့ တာဝန်မကျေမှု စတဲ့ သိမ်ငယ်တွေးများစွာ ဖိစီးခံနေရရှာတဲ့ ဇာတ်ကောင် ဦးအောင်ဖေရဲ့ စိတ်ကူးဓါးချက်တွေကို ငေးကြည့်ရင်း ကိုယ်ပါ မသက်မသာ သက်ပြင်းရှိုက်မိပါတယ်။
ပုခက်လွှဲသော လက်တစုံရဲ့ အစွဲကို ထိရှစွာ ခံစားခဲ့ရတာကတော့ ဆရာမ စံပယ်ဖြူနုရဲ့ #ဖန်သားမှန်ချပ်ရုပ်ပုံလွှာ မှာပါ။ ရင်သွေးကို တွယ်တာစိတ်နဲ့ စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေ ဖြစ်နေတဲ့ မိခင်တစ်ဦးရဲ့ အသွင်အပြင်က ဖတ်သူကို ဆွံအ စေခဲ့ပါတယ်။
ကလေးအရွယ်က အမေ တာဝန်ကျတဲ့ ပင်လယ်ဘက် ဆီကို လိုက်ပါနေထိုင်ရခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ ဆေးသားပျက် မှတ်ဥာဏ် ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာ ခပ်ရေးရေးပေါ်နေတဲ့ ပြကွက်တွေက ခုတ်ချက်မှန် သဘော်ပေါ်ကနေ လှမ်းတွေ့ရတတ်တဲ့ လှိုင်းခေါင်းဖြူတွေနဲ့ ပင်စည်တဝက်တိတိ ရေစိမ်ရင်း စွင့်စွင့်ကားကား စိမ်းဖြာနေတဲ့ ကမ်းစပ်က အပင်အုပ်ပါပဲ။ ဘာပင်မှန်း မမှတ်မိတော့ပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ ဟန်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အမှတ်သညာမှာ စွဲရစ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာ သတိုးရဲ့ #ကန္တာရနဒီ ဝတ္ထုတိုကို ဖတ်ရတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အရောင်ပြယ် အမှတ်တရမြင်ကွင်းက ဆေးသားတင်သလို ဖြစ်ရတော့တာပါပဲ။ ဓနိပင်တန်းနဲ့ ဓနိရည် တို့ရဲ့ ချစ်စရာ အသုံးဝင်မှုကို ဖတ်ခဲ့ရသလို ထို အပင်တွေကို တည်မှီပြီး အသက်မွေးခဲ့သူတွေရဲ့ ဘဝ အစိတ်အပိုင်းတွေကို လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဓနိရွက်တွေနဲ့ စနစ်တကျ ဖွဲ့သီထားတဲ့ သက်ကယ်ပျစ်တွေရဲ့အကြောင်းကို ထဲထဲဝင်ဝင် ဖတ်ရတော့ အစွန်အဖျားပဲ မှီခဲ့တဲ့ သက်ကယ်အမိုးတွေရဲ့ တန်ဖိုးကို လွမ်းမိရပေါရော။ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ရဲ့ရန်ကို တားဆီးနိုင်ပေမဲ့ မျိုးသုဥ်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ သဘာဝ အကာအကွယ်တွေ အကြောင်းကို ဖတ်ရတော့ မချင့်မရဲ ဖြစ်မိပါတယ်။
ဝမ်းရေးအခက်အတွက် ကိုယ့်သိက္ခာကို ကိုယ်တိုင်ချရောင်းရသူတစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းကို ဆရာ မင်းဝေဟင် ရဲ့ #ကောင်းကင်ယံအမှောင်မှာကြယ်ရောင်စုံတလက်လက် မှာ လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဘဝတွေကို လိုလိုလားလား နင်းချေခွင့် ပြုနေတဲ့သူတွေကို တွေ့တဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ ပင်ကိုစရိုက်ကြောင့်လား၊ ရှင်သန်ရုန်းကန်ရတဲ့ စနစ်ကြောင့်လား ဆိုလား စေ့ငုစေခဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးရယ်ပါ။ ဝတ္ထုတိုလေးကို ဖတ်ရင်းနဲ့ အလိုတူအလိုပါ ဆိုတဲ့ စကားလုံးနောက်မှာ အသံတိတ် အကြောင်းပြချက်၊ အသံမဲ့ တွန်းအားများစွာ ရှိနေတတ်တာကို သဘောပေါက်ခဲ့ရပါတယ်။
ဆရာ လူခါးရဲ့ #ဝါးဖောင်မျှောတဲ့ည ကတော့ ကိုယ့်တွေလူတန်းစား တစ်ရပ်လုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဝတ္ထုတို လို့ပဲဆိုချင်ပါတယ်။ အရင်းအမြစ်တွေကို စိတ်ကူးမယဥ်ဝံ့ပဲ စာမဆိုလောက်တဲ့ အခက်အလက်လေးတွေကိုမှ ဝမ်းစာတည်မိခါတော့မှပဲ ဝတ်စုံပြည့်တွေရဲ့ ခြောက်လှန့်ခြင်းကို ခံရတဲ့ ဝတ္ထုတိုထဲက ဝါးဖောင်မျှောတဲ့ အဖိုးအိုက ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။
#မျှော်လင့်ခြင်းကိုမျှားတဲ့ညနေ အတွက် ဆရာမြစ်ကျိုးအင်းကို အထူးကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က ဖခင်ဆိုတဲ့ အမျိုးသားတိုင်းရဲ့ သားသမီးတွေအပေါ် ထားတဲ့ စိတ်ရင်းအမှန်ကို ချရေးပြသွားတဲ့ အတွက်ပါ။ သားသမီးတွေရဲ့ ဘဝ တိုးတက်မှုနဲ့ ပတ်သတ်လာရင် တံတိုင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ဖခင်တွေရဲ့ ရင်တွင်းဝေဒနာတွေက လက်ပွန်းတတီးနေခွင့်ရတဲ့ မိခင်တွေထက် မကျော်လွန်နိုင်ရင်တောင် မလျော့ပါးတာတော့အမှန်ပါ။ အဖေတစ်ယောက် အနေနဲ့ သားသမီးတွေ ကိုယ့်အပေါ် အယုံအကြည် ကင်းမဲ့သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ညနေခင်း တခုမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ ခြေဖဝါးအောက်က ပြတ်ရှဒဏ်ရာထက် နာကျင်ခံခက်မယ်ဆိုတာ သိခွင့်ရတဲ့ ဖခင်မေတ္တာဖွဲ့ ဝတ္ထုကောင်းလေး တပုဒ်ပါ။
ကားတွေ ရထားတွေ လှေတွေပေါ်က ဘဝတွေကို ရေးပြရင်း မျက်မှောက်ခေတ်ကို သရော်ဟန်နှင့် ကလောင်စွမ်း ပြလေ့ရှိသူက ဆရာ မိုးကျော်ဇင်ပါ။ ဆရာရဲ့ #အနက်ရောင်လက်ဆွဲသေတ္တာထဲကလူ က ဖတ်ဖူးပြီးသားပါ။ ဖတ်ပြီးလည်း နောက်ထပ်အခေါက်ပေါင်းများစွာ ထပ်ဖတ်လည်း မရိုးနိုင်တဲ့ ဝတ္ထုတိုလို့ပဲ ဆိုရပါမယ်။ ဝတ္ထုထဲပါတဲ့ ဘတ်စ်ကားပေါ်က အဝတ်အစားသပ်သပ်ရပ်ရပ် နဲ့ အတ္တစီကေ့ ကိုင်ထားသူရဲ့ အဟိတ်အဟန်က ကိုယ့်ကို မှင်သက်စေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ သရုပ်မှန်ကို တွေ့ရတဲ့အခါ အပြစ်မဆိုရက်ပဲ စပ်စုယုံကြည်လွယ်တဲ့ ကိုယ့်စရိုက်ကိုသာ ပြင်ယူဖို့ ဆင်ခြင်မိပါတယ်။ ဆရာရဲ့ အခြား အလားတူ ဝတ္ထုတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “လျှာ” ကိုလည်း ဖတိကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ရထားပေါ်မှာ စျေးရောငိးစားရသူရဲ့ လျှာနဲ့ ကိုယ့် ပတ်ဝန်းကျင်က အကြီးစား လူလိမ်တွေရဲ့ လျှာကို နှိုင်းယှဥ်ရေးပြသွားတာ ပင့်သက်ချမိတဲ့ အထိပါ။
ဘဝမှာ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ ပတ်သတ်လာရင် တွယ်ငြိချည်နှောင်လာမဲ့ ကြိုးတွေကို ဖြတ်တောက်ပစ်ဖို့အတွက် ထက်မြက်တဲ့ ဓါးတွေ လိုအပ်ပါတယ်။
ဘဝမှာ စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အခါ စိတ်အေညာင်းပြေစေဖို့ ကောင်းကင်ထက်က ကြယ်ပွင့်လေးတွေကို ရေတွက်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဘဝမှာ အမိုက်မှောင် ဖုံးလွှမ်းခံရတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေမှာ လမ်းမပျောက်စေဖို့ အလင်းပွင့်လေးတွေ လိုအပ်ပါတယ်။
စိတ်ရဲ့ ထိုထိုသော လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာ စာ တွေပါ။ အဟာရ ပြည့်စုံစွာနဲ့ အရသာစုံ ပေးမဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ (၇) ဦးရဲ့ ဖန်တီးမှု အစပ်အဟပ်ကိုလည်း မြည်းစမ်းကြည့် သင့်ပါတယ်။
Lucy (verified owner) – June 17, 2022
လူကြီးမင်း၏ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ကို မျှဝေပေးပါ... Cancel reply
တန်ဖိုးရှိမှုနှုန်း Rate… Perfect Good Average Not that bad Very poor
ဝေဖန်သုံးသပ်လိုသောစာကို ရေးပါ *
(4မှတ်ချက်)
(5မှတ်ချက်)
( 1 မှတ်ချက်)
Rated 0.1 out of5based on 0.1 customer ratings
(0မှတ်ချက်)
စာပေလောက၀တ္ထုများ – ၁
No.(454), Myintawthar Rd, Tharketa Tsp,Yangon.
Ph: +95 9788397540, +95 9880526703
[email protected], www.pannsattlann.com
Copyright © 2019 Pann Satt Lann Co.,Ltd.